Warbixin “Fursadaha iyo Caqabadaha Horyaala Guddiga Doorashooyinka Puntland ! | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Guddiga kumeel-gaarka ah ee doorashooyinka ayaa shaqadoodu tahay in ay dalka gaarsiiyaan nidaamka xisbiyada badan, waxaana kamid ah shaqadooda ugu weyn.
• Diiwaan gelinta ururada siyaasadeed
• Diiwaan gelinta codbixiyaasha
• Xuduudaha Degmooyinka
• Qabashada doorashada goloyaasha deegaanka
• Wacyigelinta bulashada ee arrimaha dimoqraadiyeynta
• Dib u eegista xeerarka iyo sharciyada doorashooyinka
• Ku dhawaaqista ururada siyaasadeed ee is-diiwaan geliyey
• Ku dhawaaqidda maalinta doorashadu dhacayso
• Ku dhawaaqista natiijooyinka iyo Xisbiyada soo baxay Iyo arrimo kale oo badan.
Guddigan waxa uu jiritaan beelayaa marka ay qabtaan doorashooyinka goloyaasha deegaanka oo si rasmi ah loo aqoonsado saddexda Xisbi ee ku guuleystey kuraasta ugu badan magaalooyinka ay ka dhacdey doorashada goloyaasha deegaanka, habka kale ee ay ku jiritaan beeli karaan ayaa ah iyada oo baarlamaanku cod u qaado kaas oo noqonaya 2/3, ama iyaga oo is casila.
Guddiga kumeel-gaarka ah ee doorashooyinka Puntland ee uu ku dhawaaqey Madaxweynaha Dowladda Puntland ee Soomaaliya Siciid Cabdullaahi Deni ayaa noqonaya guddigii saddexaad ee Puntland yeelato waxaana la dhihi karaa wax badan ayey kaga duwanaan karaan kuwii ka horeeyey waxaana muhim ah in ay ka faa’ideystaan fursadaha badan ee ay haystaan.
In uu xargigga jiido dibna u dhigo magacaabista guddiga doorashada
Madaxweynaha waxa uu soo magacaabey guddi ka duwan kuwii hore kuwaas oo leh fir-fircooni, khibrad iyo aqoon, markii u horeysey ayaa haweenku ku yeesheen door muuqda hirgelinta nidaamka xisbiyada waxaana ay guddiga ku leeyihiin laba xubnood. Guddigan waxay dhaxlayaan hay’ad muddo soo shaqeyneysey taas oo aan ahayn ban-ka-ood, sidoo kale waxay dhaxlayaan khibrad dheer oo gaareysa 8 sano oo fashil ah, waxaana u diyaarsan wax badan, waxaana muhim ah in Puntland la timaado qorshe caalamku ku taageeri karo si geedi socodka hirgelinta nidaamka axsaabtu u noqdo mid hana qaada.
Marka la eego magacyada uu soo saarey Madaxweynaha Puntland waxa muuqata in tartan adag uu ka dhici doono loolanka guddoomiyaha, waxaana isku helay shakhsiyaad leh waayo-aragnimo iyo aqoon, markii hore waxaa si weyn loo saadaalinaayey in Guuleed Saalax Barre uu si fudud ku noqon karo Guddoomiyaha guddiga kumeel-gaarka ah ee doorashooyinka, waxaase arrintaas wax weyn ka beddalay magacyada uu Madaxweynaha Puntland maanta (Sabti) ku dhawaaqey markii uu dhamaystiraayey guddigan, waxaana kamid ah Cabdinuur Sh. Maxamed Isxaaq oo leh aqoon iyo waayo aragnimo durugsan, si weyna ula saanqaadi kara barnaamijka dimoqraadiyeynta, Sahra Jaamac Saalax ayaan dab yar shideyn oo ah qoraa caan ah isla markaana aan fikirkeeda la gabban, si fiicana ugu hadasha afafka Ingriiska iyo Carabiga, haddii aan habka wax-qaybisigu reebin Cabdillaahi Faarax Mire ayaa kamid ah xiddigaha Madaxweynuhu magacaabay oo ah aqoonyahan dhalinyaro ah isla markaana leh fikir hoggaamineed.
Haddii aan Madaxweyne Deni fara gashan doorashada guddoomiyaha guddiga kumeel-gaarka ah ee doorashooyinka sida ay sameeyeen labadii Madaxweyne ee ka horeeyey, waxay noqon doontaa mid adag oo xiiso badan.
Guddiga kumeel-gaarka ah ee doorashooyinka Puntland waxaa horyaala caqabado badan oo saameyn ku leh taabbo-gelintashaqadooda. Tallaabada ugu horeysa ee ay qaadayaan ayaa la doonayaa in ay noqoto abuuritaanka kalsoonida shacabka taas oo ay ku muujinayaan in ay yihiin guddi madax banaan la xasaanad ah madaxda dalka u saraysa oo aan cid gaar ah u shaqeyneyn, dib u soo nooleynta wada shaqeynta hay’adaha iyo dalalka Puntland ku taageerayey hirgelinta nidaamka xisbiyada badan si barnaamijku u helo dhaqaale ku filan oo lagu hirgelin karo taas oo si weyn u burburtey xiligii Madaxweyne Cabdiweli Gaas.
Waxaa jirata caqabad kale oo aan marna dib loo eegin taas oo ah Dastuurka Puntland iyo kan kumeel-gaarka ah ee Dowladda Federaalka oo wax badan isku-khlaafsan, sida degmooyinka iyo gobolada. Dastuurka Puntland si uu u noqdo dastuur rasmi ah waxaa lagama maarmaan ah in la is waafajiyo isaga iyo kan qabyada ah ee Dowladda Federaalka ka hor inta aan afti lagu anisixn, kadibna lagu asnixiyo afti dadweyne, ansixintii 2012 ee dastuurka waxaa ka qaybqaadey dad lagu sheegay cod xambaarayaal ka kala yimid gobolada iyo shaqaalaha dowladda, inta dastuurka aan lagu ansixin afti dadweyne waxa uu noqonaya kumeel-gaar, lagu dhaqmi karo.
guddiga cusub ee doorashooyinka Puntland waxay haystaan fursad aysan haysan kuwii hore marka la eego wakhtiga la magacaabey, waxaana horyaala kitaab ay ka buuxa fashiladii hore iyo hagardaamooyinkii dhacay, waxaana la doonayaa in ay wax ka bartaan kana faa’ideytaan wixii la soo maray, si Madaxweynaha magacaabey ay u fuliyaan himilooyinkiisa dalkana uu uga tago dhaxal cusub, si looga baxo nidaamka la daa’imey loona yareeyo doorka oday dhaqameedka ee arrimaha siyaasadda.
By : Ismail Haji Said
Previous articleDAAWO VIDEO:Xisbigii Wadani oo ka Baxay Heshiiski Kulmiye Iyo Doorasahada Maamulka “Go’an Adag Soo Saaray”
Next articleTrump oo la sheegay inuusan ka qaybgali doonin doorashada 2020 + Hadal Gaf ah oo uu bixiyay agaasimihiisa Aqalka cad.